Half Kumbist Half Anfar detonate device a mixture of Xaar - SomaliNet Forums
Joined: Tue May 25, 2004 7:00 pm
Location: Support The governor of the die-hard nationalist Ali Sandule
Postby LAFO-LAFO » Fri Jan 26, 2007 11:04 am
Postby LAFO-LAFO » Fri Jan 26, 2007 11:20 am
This fish faced Yassin Omar Waxa abti u ah explosive
Postby COSTA » Fri Jan 26, 2007 11:26 am
Why you dont say his clan Sheekhaal Hawiye
Postby highclass » Fri Jan 26, 2007 11:30 am
Postby LAFO-LAFO » Fri Jan 26, 2007 11:33 am
Waa canfar ma aha Shiikhaash.
Postby COSTA » Fri Jan 26, 2007 11:38 am
So you mean Warsans inter-marry with Canfars
Postby kambuli » Fri Jan 26, 2007 11:46 am
OO waa ku sidee bahashii waa kugu fogaataye.... Ma hadderbaad naf ka deydey nimankaa xidhxidhan inaad reer ku leexiso.... Subxaana Allaah...
Postby LAFO-LAFO » Fri Jan 26, 2007 11:48 am
[quote="COSTA"]So you mean Warsans inter-marry with Canfars [/quote]
YES, Ma akhriday sheekada markuu bamku qarxay roofka ayuu kasoo noqday naag ayuu lugaheeda ku soo dhacay. wuxuu rumaysan waayay inuu noolyahay.
Postby LAFO-LAFO » Fri Jan 26, 2007 12:16 pm
OO waa ku sidee bahashii waa kugu fogaataye.... Ma hadderbaad naf ka deydey nimankaa xidhxidhan inaad reer ku leexiso.... Subxaana Allaah...[/quote]
Are you sympatetic to them?
Postby kambuli » Fri Jan 26, 2007 12:46 pm
Lafo, quote " Kambuli
Acuudu bilaah Haddana ma inagaad naf iga daydey? Alla hoogi weyney
Postby LAFO-LAFO » Fri Jan 26, 2007 1:09 pm
[quote="kambuli"]Lafo, quote " Kambuli
Acuudu bilaah Haddana ma inagaad naf iga daydey? Alla hoogi weyney [/quote]
Postby LAFO-LAFO » Fri Jan 26, 2007 3:17 pm
[quote="highclass"]he is hawiye[/quote]